» मकवानपुरबाट पाटेबाघको छाला सहित ४ जना पक्राउ
मकवानपुरबाट पाटेबाघको छाला सहित ४ जना पक्राउ
१३ पुष २०७५, शुक्रबार ०५:३७
हेटौँडा, १३ पुस । पाटेबाघको छालासहित मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ दोबाटोबाट ४ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार बिहीबार साँझ उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ८ काभ्रे बस्ने ३० वर्षीय दिल बहादुर घलान, वडा नम्बर ८ मै बस्ने ३२ वर्षीय आत्माराम घलान, ३० वर्षीय गोमलाल थिङ र धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ सानोबाई बस्ने २७ वर्षीय दिलबहादुर तामाङ रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट पाटेबाघको ८ फिट ६ ईन्च लम्बाई र १ फिट १० ईन्च चौडाई भएको पुरै छाला बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसरी समातियो छालासहित ४ जना
पुस ९ गते बिहान साढे ९ बजेको समयमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको पालुङ बजार क्षेत्रमा बाघको छाला कारोबार हुने गरेको भन्ने विशेष सूचना प्रहरीले पाएको थियो । सूचना पश्चात वन्यजन्तु संरक्षण संघको प्रतिनिधि र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी अधिकृत सहितको टोली खोजतलासको लागि खटिएका थिए । खोजतलासका क्रममा सुराकका आधारमा ७ लाख रुपैयाँमा बाघको छाला खरिद गर्ने सुरसार गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
साँझ पौने ६ बजेको समयमा शंकास्पद रुपमा शंकास्पद रूपमा थाहानगरपालिका ३ स्थित दोबाटोमा डाँडाबासदेखि पालुङ बजारतर्फ आइरहेको ना. ३५ प ४३४२ नम्बरको मोटरसाइकल र सो मोटरसाइकलमा सवार रहेका दिलबहादुर र ना. २ ह ३९२७ नम्बरको अटो समेत रोकी जाँच गर्दा अटोमा सवार रहेका आत्माराम र गोमलाल पाटेबाघको छालासहित पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुले अटोमा सेतो प्लाष्टिकको बोराभित्र उक्त छाला लुकाएर ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । पक्राउ परेका चारै जना र अटो, मोटरसाईकल तथा पाटेबाघको छालालाई जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरमा पठाउन थालिएको छ ।